PSALIM 70 midika hoe andininy isaky ny andalana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka PSALM 70 izay midika hoe andalana
PSALM 70 izay midika hoe andalana
Andao hianarantsika ny bokin'ny Salamo 70, ny dikany manomboka amin'ny andininy ka hatramin'ny andininy anio. Nangataka fanavotana ho an'ny tenany fotsiny i David ary hamaly ny fahavalony. Toy izany koa, azontsika atao ny mampiasa an'io salamo io hitadiavana ny tavan'Andriamanitra ho fanafahana sy fanamarinana.
Raha mandinika tsara ny andininy 1-5 amin'ny Salamo 70 isika, dia nivavaka i David mba handringanana haingana ny ratsy fanahy sy hitahiry ireo tia an'Andriamanitra. Ity salamo ity dia saika nitovy tamin'ireo andininy dimy farany (Salamo 40). Raha mbola eto isika dia mahita an'i Jesosy Kristy voasoritra ao anaty fahantrana sy fahantrana. Hitanay koa izy nanonona sazy ara-drariny sy mampatahotra an'ireo fahavalony jiosy, mpanompo sampy ary anti-kristiana; ary miangavy ho an'ny fifaliana sy fahasambaran'ny sakaizany, ho voninahitry ny Rainy. Andao hampihatra ireo zavatra ireo amin'ny toe-java-manahirana antsika isika, ary amin'ny fomba mino, hitondra azy ireo sy ireo antony maha-mpanota azy ho fahatsiarovana antsika. Ny fitsapana maika dia tokony hamoha vavaka mafana hatrany.
Ny bokin'ny Salamo 70 dia eo amin'ny vavaka ho fanafahana avy amin'ny fahavalo. Rehefa nahalala kely momba an'io salamo io dia andao isika handinika tsirairay ireo andininy.
Ny hevitry ny Salamo 70 Andininy
Andininy 1: Faingàna hamonjy ahy, Andriamanitra ô; faingàna hamonjy ahy, Jehovah ô
Ny andian-teny hoe "maika," dia nesorina tamin'ireto fehezanteny manaraka ireto ao amin'ny (Salamo 40:13). Ny hoe, "Ankasitraho, Tompoko", na "Jehovah." “Faingàna hanampy ahy, Tompoko (jereo ny fanamarihana ao amin'ny Salamo 22:19). Hitantsika fa maika i David amin'ny vavaka ataony. Imbetsaka isika no mahatsapa fa tsy nandre ny vavakay Andriamanitra, satria tsy voavaly avy hatrany isika.
Andininy 2: "Aoka ho menatra sy hangaihay izay mitady ny aiko; aoka hiamboho sy hangaihay izay mitady hanisy ratsy ahy." Ao amin'ny Salamo 40:14, dia ampiana. "Miaraka" (jereo ny naoty ao amin'ny Salamo 40:14). Nomena toky i Davida fa arakaraka ny hatezerany no ho saika handringanana azy ary ny akaiky azy no hanafaka azy ireo. "Izay mitady ny fanahiko": Na "fiainana." Ao amin'ny (Salamo 40:14), dia ampiana, "Handrava azy,"; fa izany no farany notadiaviny. "Avelao hihemotra izy ireo": (jereo ny fanamarihana ao amin'ny Salamo 40:14). Nangataka tamin'ny Tompo i David mba hataony menatra ny vahoaka izay manandrana manapotika azy. Toy ny miteny i David hoe: Tsy afaka mampiseho azy ireo aho, fa asehonao ahy izy ireo. Tompo ô, ataovy menatra izy noho ny nanafihany ny iray taminao.
Andininy 3: Aoka hiamboho azy ireo noho ny fahamenarany manao hoe: Aha, aha.
Ao amin'ny Salamo 40:15 izany, "Avelao ho lao izy"; izany momba ny taniny sy ny tranony, (jereo ny naoty ao amin'ny Salamo 40:15). Izany no ampianarina antsika tsy haneso ny hafa amin'ny fahoriany, fandrao hianjera amin'ny vozony koa izany. "Izay hoy": Ao amin'ny Salamo 40:15, dia ampiana. "ho ahy,"; tsy ho an'ny olony, fa ny tenany. “Aha, aha”: Mifaly amin'ny voadiny sy ny fahoriany. Ny valisoan'izy ireo amin'ny andro fitsarana dia fanasaziana mandrakizay. Ny fanehoana (aha, aha) dia ampiasain'ny mpanaraka ny devoly. Izany dia mampiseho fotsiny hoe iza izy ireo.
Andininy 4: Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao; ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Andriamanitra. ”
Ao amin'ny andininy faha-fahefan'ny Salamo faha-70 dia nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ireo mitady Azy i Davida Mpanjaka. Nivavaka i King Mpanjaka fa Andriamanitra dia tokony hanampy ireo mitady azy ho afaka mifaly sy mifaly ao amin'ny Tompo. Ary ny hira fiderana an'Andriamanitra dia tsy tokony hesorina amin'ny molony.
Izay mitady an'Andriamanitra no mahita azy. Mipoitra eo alohany ary miverimberina. Ireo izay nahita ny Tompo dia manana zavatra mahafaly betsaka. Ireo no navotana, ary tokony hiteny. Ny fiderana an'i Jehovah dia tsy tokony hitsahatra amin'ny molotry ny navotana. Tokony hankalazaina Andriamanitra, tsy amin'ny molotsika ihany fa amin'ny fiainantsika miaina koa.
Verse 5: “Fa izaho dia ory sy mahantra; faingàna hankatỳ amiko, Andriamanitra ô: Mpamonjy sy Mpanafaka ahy ianao; Jehovah ô, aza mijanona ela.
Ny andininy fahadimy dia naneho ny fanaintainan'ny olon-tsotra. Na dia mpanjaka nanankarena aza i David mpanjaka tamin'ny androny, na izany aza, dia nanadino ny fananany sy ny fananany rehetra isaky ny teo anatrehan'ny Tompo izy. Fantany fa mahantra sy mila fanampiana izy, ary mila fanampiana avy amin'ny Tompo.
Ny Mpanjaka David dia nanambara fa Andriamanitra no mpamonjy sy mpanafaka azy ary miandry ny Tompo amin'ny fanafahana tanteraka izy. Amin'io lalan-kely io ihany, afaka mitalaho ny fanampiana izay fanampiana antsika koa isika, indrindra amin'ny fotoana ilana azy, ary hanampy antsika Izy.
Mariho fa ny fampiasana "Ny" ao amin'ny andininy faha-5 etsy ambony. Maneho izany fa ny famonjena, ny fanafahana, ary ny amin'izany, ny fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra dia ho an'ny tsirairay. Fanapahan-kevitra ny tsy maintsy ataontsika tsirairay amin'ny fotoana ilaintsika sy ilain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.
Rahoviana no ampiasainay io salamo io
Rehefa mahatsapa ho ory ao am-pontsika isika ary toa ho very ny fanantenana rehetra, toa ny andininy iray hitantsika fa i Davida dia nilaza tamin'Andriamanitra fa hanafaingana ny hanafaka azy, izay midika hoe diso fanantenana izy ary tsy manana fanantenana intsony.
Rehefa maika ny filanao, ary mila ianao, ary toa tsy misy olon-kafa mihazakazaka mitady fanampiana
Isaky ny mieritreritra ianao fa ny fahavalo dia aorian'ny fianjanao amin'ny toerana ambony
Rehefa very hevitra ianao ary tsy misy olona manodidina anao manampy na hampionona anao
Andriamanitra ô, faingàna hanafaka sy hanafaka ahy amin'ny zavatra manelingelina ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
Tompo ô, mitsangàna amin'ity volana ity, faingàna manampy ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Izay rehetra mikatsaka ny heriko rehetra dia mpandainga ianao, sorena ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Amin'ny anaran'i Jesosy, mamily ny faniriana ratsy rehetra aho ary mikasa ny handratra ahy ary hanelingelina ahy; tsy hahita fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Dada ô, amin'ity volana ity, omeo fahagagana tampoka aho izay hampangina ireo mpaneso ahy rehetra ary hamadika ny ompa nataoko hiteraka anarana amin'i Jesosy.
Ry Tompo Andriamanitra ô, rehefa mitady aho dia omenao fifaliana sy fifaliana aho mandritra ny andro iainako amin'ny anaran'i Jesosy.
ny andininy faha-
Previous lahatsoratraPSALIM 19 Andininy andinin-teny
Next lahatsoratraSALAMO 71 midika hoe andininy isaky ny andiany
Andininy ambony indrindra amin'ny Baiboly 10 momba ny fakam-panahy kjv
Teboka vavaka hanoherana ny fanamainana fandriana
Teboka vavaka ho an'ny Andro mariazy